မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: ကူညီနိုင်ရင်ကူညီပေးလိုက်စေချင်ပါတယ်...(3rd MB student)
၂၀၀၉ ခုနှစ်တုန်းက 'Fill in the Blank!' ဆိုတဲ့ မှတ်စုလေးနဲ့ အတူ တတိယနှစ် အမ်ဘီဘီအက်စ် (၁/၂၀၀၉) သင်တန်းက မောင်ရဲရင့်သူ အတွက် final part 1 နဲ့ part2ဆက်လက်သင်ယူနိုင်ပြီး ပညာပြီးဆုံးခန်းတိုင်နိုင်ဖို့ နဲ့ နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ ပညာတတ်ဆရာဝန်တစ်ယောက်တိုးပွားလာစေရေးမျှော်လင့်ချက်နဲ့ လစဉ်
ထောက်ပံ.ငွေ ( တစ်သိန်းကျပ် )ပညာသင်စရိတ်ထောက်ပံ့မှုအတွက် တတပ်တအား ပညာ ဒါန ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့တယ်။ ယခင်ကထောက်ပံ.ခဲ.သောဆေးကျောင်းသားမောင်ရဲရင်.သူမှာ ယခုအခါ တောင်ကြီးစပ်စံထွန်းဆေးရုံတွင် အလုပ်သင်ဆရာဝန်တာဝန်ကိုကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါကြောင်း မခင်သီတာအေး (စပိန်ဂိုဒ်) မှ ကိုယ်တိုင်တွေ.ဆုံလာခဲ.ကြောင်း သတင်းပေးလာတာ သိရတော့လဲ ၀မ်းမြောက်ကြည်နူးရပါသည်။
မောင်ရဲရင့်သူ အတွက် ကျမနဲ့အတူ ပါဝင်လှူဒါန်းဖူးကြတဲ့ စင်ကာပူက သူငယ်ချင်းများ (Michelle Chen၊ မင်းသူကျော်၊ ၀ါဝါအောင်၊ ခွန်ချိုမောင် နှင့် ခင်စန္ဒာလွင်) တို့ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒုတိယမြောက် အနေနဲ့ ကတော့ တတိယနှစ် ဆေးတက္ကသိုလ် (မကွေး) ကျောင်းသား မောင်ထက်ရှိုင်းလင်းအတွက် လစဉ်ထောက်ပံ.ငွေ ( ရှစ်သောင်းကျပ်) ထောက်ပံ.ကူညီ သွားရန် အလှူရှင်များအားလုံးမှ သဘောတူကြသည်.အတိုင်း ၂၀၁၂ ပညာသင်နှစ် အတွက် ပထမဆုံး ထောက်ပံ.ငွေ ကို ၈.၁.၂၀၁၂ နေ.က စတင်ကာ KBZ ဘဏ် မှ တစ်ဆင်.ပေးပို.ခဲ့ပြီး သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့ထိ ငွေစာရင်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် ။
( ၁ )မောင်ရဲရင်.သူရံပုံငွေမှကျန်ငွေ.......................................... .617500
( ၂ ) စပိန်ဂိုဒ် မခင်သီတာအေးမိသားစုမှလှူဒါန်းငွေ...............................500000
(၃) ဂိုဒ် ဖြူဝတ်ရည် (ခ) Snow Ayeလှူဒါန်းငွေ................................... 200000
(၄) ဂျာမန်ဂိုဒ်မခင်မြတ်မော် မှ လှူဒါန်းငွေ............................... 10000
(၅) ဦးသိန်းအေး + ဒေါ်နုနု ( နတ်မောက်) မှလှူဒါန်းငွေ ............ 10000
အလှူငွေစုစုပေါင်း = 1337500
ထက်ရှိုင်းလင်းသို.ပို.ငွေ January + February + March+ April + May+June+ July+ August x 80000............= 640,000 kyats
လက်ကျန်ငွေ = 697500 ကျပ်
စာဖြင်. (ခြောက်သိန်းကိုးသောင်း ခုနစ်ထောင် .ငါးရာကျပ်တိတိ ) ဖြစ်ပါသည်။
မောင်ထက်ရှိုင်းလင်းသို. ထောက်ပံ့ငွေ ၈၀၀၀၀ ကျပ်မှာ US$ 92
သာဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ကုန်ဈေးနှုံး နှင့်တွက်ဆလျှင် အင်မတန်နည်းသော ပမာဏဖြစ်သော်လည်း လုံလောက်သော ရံပုံငွေ မရှိသေးပါ။ ယခုနှစ် တတိယနှစ် အမ်ဘီ အတွက် နှစ်လ နှင့် final part 1 ၊ part2အတွက်ပါဆိုလျှင် စုစုပေါင်း ၂၂လ ထောက်ပံ့ ရန်ကျန်ရှိပါသည်။ လစဉ်ထောက်ပံ့ငွေ တစ်သိန်းကျပ် နှုံးထောက်ပံ့ရန် ၂၂လစာအတွက် ၂၂သိန်းကျပ် လိုအပ်ပါသည်။ လက်ကျန်ငွေ ခြောက်သိန်းကိုးသောင်း ခုနစ်ထောင် .ငါးရာကျပ်တိတိ ထည့်လျှင် ၁၅သိန်းခန့် ထောက်ပံ့ ရန်ပုံငွေ လိုအပ်နေပါသေးသည်။ လက်ရှိ ထောက်ပံ့ငွေ ၈၀၀၀၀ ကျပ်အတိုင်း ထောက်ပံ့လျှင်ပင် နောက်ထပ် ၉လစာ ထောက်ပံ့ပြီးနောက် မည်သို့ ဆက်လက်ထောက်ပံ့နိုင်ရန် အခက်အခဲ ရှိနေပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဒီအချိန်မှာအတော်ကိုပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်...ကျွန်မလဲ အနည်းငယ်မျှသာ ကူညီနိုင်ပါသည်။...ဒီတော့ကူညီနိုင်မယ့်သူ တစ်ယောက်ယောက် သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းများ
တတိယနှစ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ပညာပြီးဆုံးခန်းတိုင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင် နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ပညာတတ်ဆရာဝန် နောက်ထပ်တစ်ယောက် ထပ်မံတိုးပွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်...
Credit ။ ။ လစဉ် ငွေလွှဲပို့ပေးမှု တာဝန်ခံကာ လက်ကျန်ငွေစာရင်း အမြဲပို့ပေးသော ကိုညီ ( သရ၀ဏ်) အား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
Direct Contact: Ko Nyi
For Ref: Fill in the blank! Gepostet von
" Fill in the Blank " website is not currently available. why ?Could we get to know Mg Ye Yint Ag's contact detail ?
Sorry, that note is published in FB notes. If you are not in my friends list, not able to read.Anyway, I just copied over here.http://www.melody-maung.com/2009/10/fill-in-blank.html August 16, 2012 at 7:56 PM
ကူညီနိုင်ရင်ကူညီပေးလိုက်စေချင်ပါတယ်...(3rd MB stud...